पुस १६ मा पानीजहाज चढेर कलकत्ता जान प्रधानमन्त्री ओलीको निम्ता
असार १४, २०७५| प्रकाशित १७:१७
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पुस १६ मा पानी जहाज चढेर कलकत्ता जान निम्ता दिएका छन्। काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले हेर्दाहेर्दै यही पुस १६ गते पानी जहाज चल्ने बताएका हुन्।
'रेलको कुरा गर्दा खेलौना रेल हिँडाउने, जहाजको कुरा गर्दा बाल्टिनमा पानी राखेर डुंगा चलाउने', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं। के हुन्छ अब त्यो पोहोर बोलेका कुरा? दुई वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा, म त अब कमसे कम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता जाने निम्तो छ साथीहरुलाई।'
प्रधानमन्त्रीले अाफूहरुले न्याय र समृद्धि चाहेको स्पष्ट पारे। 'तर आलोचना, टिप्पणी र विरोध गर्नेलाई सुझाब पनि दिन चाहन्छु– तपाईंले बोलेका कुरा रेकर्डेड छन्, इतिहासमा। रेकर्डेड हुन्छन् आजका मिडियको जमानामा याद गर्नुस्, दस वर्ष पछाडि तपाईंलाई मजाकको पात्र दुनियाँले नबनाओस्', प्रधानमन्त्रीले भने।
कार्यक्रममा समाजवादका आधारबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गहन तर्क राख्नुभन्दा पनि नाकाबन्दी देखि रेलसम्मका कुरा जोडेर व्यंग्यमै बढी समय खर्चिए। उनले भने, 'फुफु गरेर धुवाँमा फुक्दै गरेकालाई पाइपबाट ग्यास लगिदिन्छु भन्दा झन्डै बहुलाएनन्।'
उनले आफूले नाकाबन्दीको युग समाप्त गरेको दाबी गर्दै भने, 'अब नाकाबन्दी लाग्न सक्दैन। बाह्य हस्तक्षपको युग बन्द भयो।'
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ३ भित्र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन बनाउने बाचा पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मार्क्सवादसँग सहमत नहुने र आलोचना गर्नेहरुलाई मार्क्सवाद नै नपढेको र नबुझेको बताए। 'कतिपय पढेलेखेकै बुद्धिजीवीले पनि मार्क्सवादसँग म सहमत छैन, म मान्दिन भन्ने गर्छन्। अनि हामीलाई बुद्धिजीवीले भनेका हुन् भन्ने भ्रम पर्छ', उनले भने, 'पुल बनाउने इन्जिनियरले प्लेन चलाउँछ? त्यस्तै हो। पुल बनाउने पढेकाले भन्छ, प्लेन चलाउन मन लाग्दैन। जानेकै छैन, के चलाउँछ? उसले मार्क्सवाद पढेकै छैन, मार्क्सवाद बुझेकै छैन, मार्क्सवादको मर्मै थाहा छैन। के बुझ्छ र केलाई समर्थन गर्छ उसले?'
प्रधानमन्त्रीले मार्क्सवाद झण्डाबुर्जा खेलेर ननिस्किएको दाबी गरे। 'तिहारतिर एउटा बट्टामा हालेर केटाकेटीले खेल्छन् नि, झण्डाबुर्जा', उनले भने, 'झण्डाबुर्जा खेलेर निस्किएको होइन मार्क्सवाद।'
३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरण : धरौटीमा रिहा भएका प्रहरीको निलम्बन फुकुवा हुँदै